တရုတ်ပညာရှင်သုံး PU Foam လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပညာရှင်သုံး PU Foam Manual အမျိုးအစား
Professional သုံး PU Foam Manual အမျိုးအစားသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ အရည်အသွေးမြင့်ဘက်စုံသုံး polyurethane အမြှုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေမြှုပ်လျှောက်လွှာကောက်ရိုးနှင့်သုံးရန်အဆင်ပြေအောင် ဦး ခေါင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြည့်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်နိုင်မှု စျေးကွက်ရှိအဆင့်တူ PU အမြှုပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းဟုခေါ်သည့်အရှည်ဆုံးမီတာ ၂၈ မီတာရှိသည်။
ပညာရှင်အဆင့်အသုံးပြုမှု PU ဖောင်သုံးလက်စွဲအမျိုးအစား ၁။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး
2. ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးပြုမှု PU ဖောင်အသုံးပြုနည်းအမျိုးအစား
တက်ခ်-အခမဲ့အချိန် (မိနစ်) ၅ ~ ၆
ခြောက်သွေ့သောအချိန် ၁၀-၁၂ မိနစ်အကြာတွင်ဖုန်ကင်းစင်သည်။
ဖြတ်တောက်ချိန် (မိနစ်) ၃၀ ~ ၄၀
အထွက်နှုန်း (L) 60
ဆယ်လူလာဖွဲ့စည်းပုံ > ၉၀% ပိတ်ထားသောဆဲလ်များ
တိကျသောဆွဲငင်အား (kg/m³) 13
Insulation Factor (Mw/m.k) 0.036
ချုံ့အား (kPa) 110
ကော်ခိုင် (kPa) 120
3. ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချ PU ဖောင်သုံးလက်စွဲအမျိုးအစား
4. ပညာရှင်အဆင့်သုံး PU ခြေရာခံအသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်များ
၅။ သိုလှောင်မှုနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာအသုံးပြုမှု PU ဖောင်သုံးလက်စွဲပုံစံ
6. ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်း PU FOAM အသုံးပြုနည်းအမျိုးအစား
Q: PU foam ရဲ့အရောင်ကဘာလဲ။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြူရောင်အရောင် PU အမြှုပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၀ ယ်သူသည်အထူးလိုအပ်ချက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အရောင်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
hot Tags:: Professional သုံး PU Foam Manual အမျိုးအစား၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်ယူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်၊ စက်ရုံ၊ စျေးနှုန်း
ပညာရှင်သုံး PU Foam